XOG:- Xiisad ka dhalatay kullan ka dhacay xarunta madaxtooyadda – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xiisad ka dhalatay kullan ka dhacay xarunta madaxtooyadda
Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi C/laahi ayaa la sheegay inuu iska diiday dalab uga yimid madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo, kadib kullan madaxtooyadda Soomaaliya ku dhexmaray labadaasi mas’uul.
Kullankaasi oo uu dalbaday madaxweyne Farmaajo ayaa xog ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ku ogaatay inuu ku saabsanaa xaaladda ka dhalatay baaqii Aqalka Sare ee shir wadatashi ah oo ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboledyada oo ay wehliyaan daneeyayaasha siyaasadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dalbaday guddoomiyaha aqalka sare inuu ka laabto qoraalkii guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare kasoo baxay 11-kii bishaan iyo baaqii shirka wadatashiga, taasoo uu ku gacan seyray Cabdi Xaashi, kadib markii ay madaxweynaha isku fami waayeen.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu dadaal u galay sidii uu guddoomiyaha Aqalka sare ee baarlamaanka ugu qancin lahaa inay sii wada shaqeeyaan labada Aqal ee Baarlamaanka ayna ansixiyaan sharciga xisbiyada ee dib loo eegay iyo xeerarka sharciga doorashada, taasoo guddoomiye Cabdi Xaashi uu sheegay inuusan awood ua lahayn.
Kullanka labadaasi mas’uul ayaa sida aynu xaqiijinay kusoo dhammaaday natiijo la’aan, iyadoona uu socon waayay qorshihii uu watay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa sida muuqata qeyb ka ah cadaadiska xoogan ee muddooyinkii ugu dambeysay lagu haayay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi C/laahi.